आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरू, एक अविस्मरणीय देश | Absolut यात्रा
आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरू
लुइस मार्टिनो | | आयरल्याण्ड
आयरल्यान्डको शीर्ष १० पर्यटक आकर्षण बल, अद्भुत प्राकृतिक ठाउँहरू, प्राचीन स्मारकहरू, साना विशिष्ट र ऐतिहासिक शहरहरू र पुरातात्विक अवशेषको महत्त्वको साथ समावेश गर्नुपर्दछ।
आयरल्यान्ड को रूपमा चिनिन्छ "हरित इरिन" निश्चित रूपमा यसको बहुमूल्य र of्गको विपुल प्रकृतिको कारण। यद्यपि यो मेसोलिथिकदेखि नै बसोबास गर्दै थियो, यसको सांस्कृतिक उत्पत्ति अघिल्लो आगमनको लागि हो सेल्ट्स यस टापुमा, जुन सोह्र सयौं ईसा पूर्व वरिपरि भएको थियो। विशेष गरी तिनीहरू शहरहरू थिए gaelic र तिनीहरूले आफ्नो जीवन शैली यती तीव्रताका साथ तय गरे कि आज पनि आइरिशहरूले उनीहरूका धेरै परम्परा र उनीहरूको भाषा लाई पन्छाउँछन्। आज, आयरल्यान्ड एक सुन्दर देश हो जुन तपाईंलाई कहिले पछुताउनु पर्दैन। यदि तपाईं यो गर्न जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईं आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई पढ्न जारी राख्नको लागि हौसला दिन्छौं।
1 आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरू: विशालकाय कजवेबाट डब्लिनका सडकहरूमा
1.1 १-- डब्लिन, राजधानी
1.2 २.- ब्रु ना बेन्ने, पुरातात्विक विरासत
1.3 - बुरेन, उजाड
1.4 - मोहरको क्लिफ्स, एट्लान्टिकको अनुहार पर्खाल
1.5 - ताराको पहाड
1.6 - Glendalough, आयरिश क्रिश्चियनको उत्पत्ति?
1.7 - विशालका कजवे
1.8 - केरीको औंठी
1.9 -.- स्लिगो र यसको वरपर
1.10 १०- Bunratty महल र फोक पार्क
आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरू: विशालकाय कजवेबाट डब्लिनका सडकहरूमा
हामीले भनेझैं, आयरल्याण्डले तपाईंलाई प्राकृतिक ठाउँहरू थोपाउने प्रस्ताव गर्दछ, तर मध्यकालीन महलहरू र अबीहरूलाई धुंध र साना सहरहरूमा समेटिएको छ जसमा समय रोकिन्छ जस्तो देखिन्छ। हामी यी सबै ठाउँहरू जान्ने छौं।
१-- डब्लिन, राजधानी
यो आयरल्यान्डको सब भन्दा विशिष्ट छैन, तर देशलाई चिन्ने उत्तम तरिका यसको राजधानीबाट शुरू गर्नु हो। डबलिन महान साहित्यिक अनुनाद सहितको सहर हो जसको सडकहरूमार्फत हामी सोच्छौं कि हामी लियोपल्ड ब्लूम टहलिरहेको देख्छौं 'Ulises' de जेम्स जोयस.
King औं शताब्दीका आसपास वाइकिंग्स द्वारा स्थापित, डब्लिनले तपाईंलाई गोथिक रत्नहरू प्रदान गर्दछ पवित्र ट्रिनिटीको क्याथेड्रल, लोकप्रिय रूपमा परिचित "क्रिष्ट गिर्जाघर"। तर पनि एक दर्शनीय महल अठारौं शताब्दीमा अघिल्लोको अवशेषमा निर्माण गरिएको।
शहर मा अर्को देख्नु पर्छ ट्रिनिटी कलेज, १ XNUMX औं शताब्दीमा स्थापना भयो र जसको मुख्य आकर्षण यसको प्रभावशाली पुस्तकालय हो, देशको सर्वश्रेष्ठ। र, यदि तपाईं हिंड्न चाहनुहुन्छ भने, आउनुहोस् सेन्ट स्टीफन्स ग्रीन oa Merrion वर्ग, जहाँ एकवचन मूर्ति ओस्कार वाइल्ड। अन्तमा, भ्रमण गर्न नबिर्सनुहोस् गुयनेस स्टोरहाउस, जहाँ तपाईं यस लोकप्रिय बियर को इतिहास सिक्नुहुनेछ।
२.- ब्रु ना बेन्ने, पुरातात्विक विरासत
मा अवस्थित काउन्टी methयो पुरातात्विक साइट ठूलो फ्लैट चिहान टिब्बा अस्सी मिटर व्यास र तेह्र मिटर अग्लो द्वारा बनाईएको, साथै अन्य साना चिहानहरू अत्यन्त मूल्यवान छ। तपाइँलाई एक विचार दिन, हामी तपाइँलाई यो के हो बताउनेछौं Stonehenge पहिले हजार वर्ष र यो सम्पूर्ण देश मा एक प्रसिद्ध necropolise गठन।
- बुरेन, उजाड
यो छ काउन्टी क्लेयर र उसको नामको अर्थ हो "ढुony्गा ठाउँ", जसले तपाईंलाई पहिल्यै विचार दिनेछ यदि तपाईंले भ्रमण गर्नुभयो भने के पाउनुहुनेछ। जे होस्, यो यसको आकर्षण बिना छैन। यो एउटा विशिष्ट प्रकारको हुन्छ कार्ट परिदृश्य सानो चुनाढु hills्गा पहाडहरू जो क्र्याकहरू भएर पार भई समुद्रमा पुग्दा चट्टानहरू हुन्थ्यो।
तर बुर्रेन यसका लागि आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरूमा पनि छ पुरातात्विक मान। योसँग लगभग एक सय मेगालिथिक थम्बहरू छन् जस्तो प्रसिद्ध छ Poulnabrone डोल्मेन र सेल्टिक क्रसहरू। साथै शहरहरू जस्तै Caherconnell र Cistercian मठहरु जस्तै Corcomroe Abbey, तेह्रौं शताब्दीमा मिति।
- मोहरको क्लिफ्स, एट्लान्टिकको अनुहार पर्खाल
उहीमा काउन्टी क्लेयर र बुर्रेनको दक्षिणपश्चिममा यी प्रभावशाली चट्टानहरू छन् जुन अटलान्टिक महासागरलाई आयरल्याण्डमा प्रवेश गर्नबाट रोकिरहेको जस्तो देखिन्छ। तिनीहरू करीव आठ किलोमिटरको लागि तन्काउँछन् र दुई सय मिटर भन्दा बढीको उचाईमा पुग्छन्।
आधा बाटो क्लिफ्स मोहर हो O'Brien टावर, १ tourists1835 in मा पर्यटकहरूका लागि दृश्यको रूपमा निर्माण गरिएको थियो जुन त्यस समयमा यस इलाकामा पहिल्यै आइसकेको थियो। यसबाट, तपाईं प्रभावशाली देख्न सक्नुहुनेछ ग्यालवे बे; को एरन टापुहरूफलामको युगदेखि नै बसोबास, Dún Dacchahair को विनाश द्वारा प्रमाणित, र पनि माउमटुर्क पर्वतहरू, कोन्नेमेरा क्षेत्रमा।
- ताराको पहाड
अर्को जादुई ठाउँ तपाईंले आयरल्याण्डमा अवलोकन गर्नुपर्दछ यो लामो चूना ढुstone्गा वृद्धि स्मारकहरूले भरिएको हो। यस्तो महत्त्व यो थियो कि १२ औं शताब्दीसम्म यो टापुमा जीवनको केन्द्रबिन्दु मानिन्थ्यो। वास्तवमा, यो को लागी पनि चिनिन्छ राजाहरुको पहाडी किनकि यो हाईल्याण्ड्सको पुरानो राजाहरूको सिंहासन थियो।
यो प्रभावशाली ठाउँमा तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ Ráith Na Rig दुर्ग, फलामको युगबाट। परिधि मा यसको किलोमीटर को साथ, यो तथाकथित को रूप मा जिज्ञासा राख्छ स्ट्यान्ड स्टोनजहाँ यो विश्वास गरिन्छ कि आयरल्याण्डका राजाहरूले ताज लगाए; को कोरिडोरमा चिहान बन्धकहरूको टाउको; को स्लोप ट्रेन्च वा लाओघायर, ग्रुन्ने र क्वीन मेडबको किल्लाहरू। क्षेत्रमा गरिएको धेरै अध्ययनहरूको बाबजुद, ताराको पहाडको सम्पूर्ण इतिहास अझैसम्म थाहा छैन। तर, केही विज्ञहरूका अनुसार यो टापु, पूर्व-सेल्टिक बासिन्दाहरूको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शहर थियो Tuatha De Dannan.
- Glendalough, आयरिश क्रिश्चियनको उत्पत्ति?
दुबै रहस्य र रहस्यवाद द्वारा घेरिएको, Glendalough जटिल एक पुरानो सुविधा मठ छैटौं शताब्दीमा सेन्ट केविनले सिर्जना गरेको। जे होस्, तपाईंले आज देख्न सक्नुहुने भवनहरू आठौं र १२ औं शताब्दीको बीचमा निर्माण गरिएको थियो।
यो दुई तालहरू, बेलनाकार टावरहरू, घरहरू र गिर्जाघरहरूको साथ अद्भुत ठाउँ हो। पछिल्लो, कि को सेन्ट मार्च, सानो सेन्ट केविनको भान्छा वक्तृत्व र कलहरू कैथेड्रल y सन्दर्भ। घरहरूको लागि, तपाईले एउटा संत देख्न सक्नुहुन्छ वा सेन्ट केविनको सेल र गोलि, जसले कम्प्लेक्समा प्रवेश दिन्छ।
- विशालका कजवे
यो प्रभावशाली समुद्री किनार स्थित मा स्थित छ काउन्टी एन्ट्रिम, आयरल्याण्डको उत्तर पूर्वी तटमा। यो त्यस्तो क्षेत्र हो जसमा करिब forty० हजार स्तम्भहरू बासाल्ट समावेश गर्दछ जुन ज्वालामुखी विस्फोट si० लाख वर्ष पहिले उत्पन्न भयो।
यद्यपि आयरल्याण्डमा अन्य कथाहरूको लागि त्यहाँका बासिन्दाहरूको राक्षस कजवेको लागि बढी काव्य र पौराणिक विवरण छ। मानिसहरू भन्छन् कि फिन उहाँ एक स्थानीय राक्षस हुनुहुन्थ्यो जो धेरै नराम्ररी खराबसँग मिल्नुभयो बेन्नान्डोनर, उही अवस्थाको, तर जो स्टर्काको स्कटिश टापुमा बस्थ्यो। तिनीहरूको दुश्मनी त्यस्तो थियो कि विशाल ढु stones्गा निरन्तर फ्याँकिन्थ्यो। यति धेरैहरू सुरूवात भयो कि उनीहरूले समुद्र तर्फ बाटो बनाए। उनको माध्यमबाट फिनलाई हराउनको लागि स्कट्सम्यान आए।
यद्यपि उनले आफ्नी श्रीमतीलाई भेट्टाए जसले बेनान्डोनरलाई आफू फिनको छोरो हो भनेर विश्वास दिलाउन आफ्नो श्रीमानलाई बच्चाको भेषमा बदली गरी। यसैले, आगन्तुकले सोचे, यदि बच्चा त्यो साइज हो भने, बुबा धेरै ठूलो हुनुपर्छ। तब डराएर त्यो ढु again्गाको थुप्रोमा लाग्यो र यति जोडले ढु .्गाले हिर्कायो कि त्यसले तिनीहरूलाई समुद्रमा डुबायो र समुद्रको किनारमा मात्र रहे।
जे भए पनि विशालको कजवे यो आयरल्याण्डमा अवश्य अवलोकन गर्नुपर्दछ। घोषणा गरिएको छ विश्व सम्पदा र यो एक प्रभावशाली राष्ट्रिय प्रकृति रिजर्व भित्र छ।
- केरीको औंठी
यो सुन्दर पर्यटन मार्ग मा समावेश छ किलरने तालहरू, एक अद्भुत प्राकृतिक स्थान जुन मा अवस्थित छ काउन्टी केरी र त्यो पनि घरहरू carrauntoohill, देशको सब भन्दा अग्लो पहाड। थप रूपमा, यस प्राकृतिक पार्कमा तपाईं अचम्मका चीजहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ जुन मक्रुरो अबे र Roos महल.
तर केरीको रिंग भनेको एक संगठित पर्यटन भ्रमण हो जुन १ 170० किलोमिटर कभरेर अन्य स्थानहरू पनि भ्रमण गर्दछ बहादुरी र स्केलिग टापुहरू, the महिलाहरु हेर्ने लुकआउट वा Staigue पत्थर फोर्ट.
-.- स्लिगो र यसको वरपर
यस शहर आफैं भन्दा पनि हामी तपाईलाई यसको वरपर हेर्न सल्लाह दिन्छौं। शुरुवातकर्ताहरूको लागि, मा streedagh समुद्र तट को केही ग्यालन्स अजेय सेना र उसको बचेकाहरू डेरी सम्म पुगे। तर, साथै, मा क्यारोडोर तपाईं megalithic अवधि बाट एक प्रामाणिक खुला एयर संग्रहालय हेर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि पौराणिक व्यक्तिको चिहान रानी मावे भूमिगत फेला पर्दछ, कथा अनुसार, इन नकनरिया.
तिनीहरू क्षेत्रका केवल सेल्टिक किंवदन्तीहरू मात्र होइनन्। नजिक क्याश के तिमी उसलाई देख्न सक्छौ? Cormac MacAirt को गुफा, प्राचीन आयरल्याण्ड को प्रसिद्ध राजा। मानौं यी सबै पर्याप्त छैनन्, यस क्षेत्रमा विशाल प्राकृतिक सुन्दरता छ, परिदृश्यहरू जस्तै गिल ताल, को टापु संग असन्तुष्ट यसले कविलाई धेरै प्रेरणा दियो विलियम बटलर याइट्स। अन्तमा, जिज्ञासाको रूपमा, भित्र tubbercurry तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ अचोनरी गिरजाघर, आयरल्याण्डको सब भन्दा सानो मानिन्छ, किनकि यसको केवल square० वर्ग मीटर छ।
१०- Bunratty महल र फोक पार्क
यो छ काउन्टी क्लेयर र यो एक उत्तम नमूना हो नॉर्मन वास्तुकला। यो १ XNUMX औं शताब्दीको शुरुमा अघिल्लो किल्लामा निर्माण गरिएको थियो। यो मूलको अनुसार पूर्वावस्थामा ल्याइएको छ र वर्तमानमा एकमा समावेश छ लोक पार्क। यो मिल किसानहरू, फार्महरू र गिर्जाघरहरूको साथ रहेको सम्पूर्ण किसान शहर हो। यसको अंशको लागि, महलले मध्यकालीन डिनर-शोहरू आयोजना गर्दछ।
अन्त्यमा, हामीले तपाईलाई आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरू। तर यस टापुमा तपाईंलाई प्रस्ताव गर्न अझ धेरै छ। उदाहरण को लागी, को दर्शनीय परिदृश्य ग्लेन ग्लेन दर्रा राजमार्ग; प्रभावशाली kylemore अबी, फ्रेन्च नन्स द्वारा स्थापित; को ब्लेर्नी महल, कर्कको नजिक, जहाँ तथाकथित Eloquence को ढुone्गा; भव्य परिदृश्य जुन तपाइँलाई देखाउँदछ निलम्बन पुल क्यारिकबाट रिडि वा "टेबल माउन्टेन" de बेन्बुलबिन। के तपाईं यी सबै चमत्कारहरू जान्न चाहानुहुन्न?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » आयरल्यान्डमा शीर्ष १० पर्यटक आकर्षणहरू
भ्याटिकनमा बर्निनीको कर्नोनेड